दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नका सन्दर्भमा - Sisne Online
दर्शनशास्त्र मानव चेतनाको रुपहरुमध्ये एक हो ।त्यसैले वैज्ञानिक साम्यवादका सिध्दान्तकार कार्ल माक्र्सले ” हरेक साँचो दर्शन आफ्नो समयको बौद्धिक र संस्कृतिको जीवन्त आत्मा हो ” हो भन्नुभएको छ । पहिलो , दर्शन भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने , बुझ्ने र व्याख्या गर्ने विश्वदृष्टिकोण हो ।
दोस्रो , दर्शन भनेको संस्कृति र मानव समाजका एवं चिन्तनका चालक ( Governing ) वा सामान्य ( General ) नियमहरु ( Laws ) को विज्ञान हो । यसले प्रकृति र मानव समाज एवं चिन्तनका ती चालक वा सामान्य नियमहरुको अध्ययन गराएर विश्वदृष्टिकोणको निर्माण गराउँदछ । तेस्रो , दर्शन भनेको सिंगो जीवन र जगत तथा प्रकृति र मानव समाज एवं चिन्तनका सामान्य नियमहरुको अध्ययन गर्ने एक पध्दति ( Methodology ) हो । यसले जीवन र जगतको अध्ययन कसरी र केका आधारमा गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ ।
मुख्यतः एउटा शास्त्रका रुपमा दर्शन शब्दको पहिलो प्रयोगकर्ता युनानी दार्शनिक पाइथागोरस हुन् । उनलेे दर्शनलाई बुझाउने फिलोसफी ( Philosophy ) शब्दको प्रयोग गरेका थिए । फिलोस ( प्रेम ) र सोफिया ( विवेक ) जस्ता शब्दको मिलनबाट फिलोसफी बन्यो , जसको अर्थ विवेक प्रेम वा विद्यानुराग हुन्छ । कार्ल माक्र्सका अनन्यमित्र तथा सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्सले
वर्गसमाजमा हरेक वर्गले आ- आफ्नाा विचार , उद्श्ये , मत , संकल्प , भावना एवं क्रियाकलापको आौतित्य पुष्टि गर्न जरुरी हुन्छ र दर्शनले ठिक यसै आौचित्य पुष्टिको काम गर्दछ । तसर्थ हरेक दार्शनिक प्रणाली भित्र मूलतः तीन तत्व पर्दछन् – वर्गीय पक्षधरता , सिध्दान्त र पध्दति । वास्तवमा यिनै तीन तत्वको समग्रताको नाम दर्शन अर्थात् विश्वदृष्टिकोण हो ।
यसरी दर्शन के हो ? यसलाई कसरी बुझ्ने र परिभाषित गर्ने ? दर्शनको विषयवस्तु , अर्थ र महत्व के हो ? दर्शनमा के कस्ता प्रवृत्तिहरु छन् र तिनका बीचमाकसरी संघर्ष चल्दै आएको छ ? यी प्रश्नहरुवारे आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथम दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नवारे अध्ययन गर्न जरुरी छ । यश आलेखमा विशेषगरी दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नका सन्दर्भमा आधारित भएर लेख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
ती मध्ये पहिलो प्रश्न हो – सत्ता र चिन्तन अर्थात् पदार्थ र चेतना मध्ये कुन प्राथमिक (पहिलो) हो ? र जसले सत्ता अर्थात् पदार्थलाई प्रधान ( पहिलो ) हो भन्दछ त्यो भौतिकवादी हो र जसले चिन्तन अर्थात् चेतनालाई प्रधान ( दोस्रो ) हो भन्ने मान्दछ त्यो आदर्शवादी हो ।
जब आदिम साम्यवादको अन्त्य भएर दास मालिक युगको उदय भयो तब देखि जीवन जगतलाई बुझ्ने दुई दर्शनशास्त्र पनि उदय भए । ती दुई दर्शनशास्त्रमा भौतिकवाद र आदर्शवाद मुख्य हुन् । यी दुई दर्शन मध्ये दार्शनिकहरुलाई पनि दुई भिन्न कित्तामा उभ्याई दिन्छ । जस्तैः पदार्थ र चेतनामा पदार्थ पहिलो हो र चेतना पदार्थ कै विकसित रुप हो भन्ने स्वीकार गर्ने दार्शनिकहरु भौतिकवादी कित्तामा उभिन्छन् भने चेचना पहिलो हो पदार्थ चेतनाको उपज हो भन्ने स्वीकार गर्ने दार्शनिकहरु आदर्शवादी कित्तामा उभिन पुग्दछन् ।
त्यस्तै दुईवटा यस्ता प्रश्नहरु छन् जसको जवाफले मानिसलाई दर्शनका दुई कित्ता मध्ये एउटा कित्तामा उभ्याइदिन्छ । त्यस मध्ये पहिलो प्रश्न हो सत्ता र चिन्तन अर्थात् पदार्थ र चेतना मध्ये कुन प्रमुख हो ? यसको सही उत्तर हो जसले सत्ता अर्थात् पदार्थलाई प्रधान हो भन्दछन् ती भौतिकवादी कित्तामा खडा हुन्छ । र , जसले चिन्तन अर्थात् चेतनालाई प्रधान हो भन्ने मान्दछ त्यो आदर्शवादी कित्तामा खडा हुन्छ ।
तसर्थ पदार्थलाई आदितत्व र चेतनालाई पदार्थबाटै उत्पन्न भएको कुरा मान्ने दार्शनिकहरु भौतिकवादसित सम्बन्धित छन् । उनीहरूले दृष्टिकोणमा पदार्थ शाश्वत छ अर्थात् कसैले पनि कहिल्यै पदार्थको सृष्टि गरेको होइन र वस्तुगत जगतमा कुनै किसिमको अलौकिक वाा पारलौकिक शक्तिको अस्तित्व छैन । चेतना चाहिँ पदार्थको ऐतिहासिक विकासको उपज हो भन्ने अवधारणा भौतिकवादी दार्शनिकहरुको रहेको छ भने “आत्मा ” चेतनालाई आदितत्व मान्ने दार्शनिकहरु अध्यात्मवादसित सम्बन्धित छन् । उनीहरूले दृष्टिकोणमा पदार्थ भन्दा पहिले नै चेतनाको अस्तित्व थियोे र त्यसैले पदार्थलाई जन्माएका हो अर्थात् चेतना नै सम्पूर्ण अस्तित्वको पूर्वाधार हो । र , भौतिकवादी दार्शनिकहरुले जगत बोधगम्य छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् भने अध्यात्मवादी दार्शनिकहरु जगतको बोधगम्यतालाई अस्वीकार गर्दछन् ।
मूलतः चिन्तन र सत्ताको सम्बन्धको प्रश्न दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्न हो ।यसरी यहाँ चिन्तन र सत्ता जस्ता दुईवटा महत्त्वपूर्ण शब्दहरुको जसरी उल्लेख गरिएको छ हामीले यी शब्दको वास्तविक अर्थ बुझ्न जरुरी हुन्छ । तसर्थ यहाँ प्रयोग गरिएको चिन्तन शब्दावली अर्थात् संवेदना ,अनुभव ,इच्छा , संकल्प , विचार , अवधारणा , सिध्दान्त , दृष्टिकोण जस्ता चेतनाका विविध रुपहरु पर्दछन् । सत्ता भनेको अस्तित्व हो , विश्व हो ।यश अन्तर्गत प्रकृति र समाज पर्दछन् । यश अर्थमा सत्ता र चिन्तनको प्रश्न विश्वदृष्टिकोणको प्रश्न बन्न पुग्दछ र यही नै दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्न हो ।
यहाँ दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नका दुई महत्त्वपूर्ण पहलुहरु छन् । जस्तो पहिलो पहलु अन्तर्गत चिन्तन र सत्ता बीच प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने कुरा आउँछ । दोस्रो पहलु अन्तर्गत चिन्तन र सत्ताबिचको आपसी अन्तर्क्रिया उद्घाटित गर्ने कुरा पर्दछ ।
अर्कोथरी जसले प्रकृति प्राथमिकता दिए ती दार्शनिकहरु भौतिकवादका विभिन्न शाखाहरुमा खडा (सामेल) भए । यसरी दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नको जवाफ दिने सन्दर्भमा दार्शनिकहरु कसरी आदर्शवाद र भौतिकवाद जस्ता दुई ठूला शिविरमा विभाजित भए भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा जान्न सकिन्छ ।
साथै यश अतिरिक्त आदर्शवाद र भौतिकवादको बीचमा समन्वय कायम गर्ने , दुबैलाई समानन्तर रुपमा लिने वा तटस्थ रहने तेस्रो धारा पनि पाइन्छ । तसर्थ दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नको पहिलो प्रश्नको उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा मूलतः तीन प्रवृत्ति पाइन्छन् , जस्तै आदर्शवाद , भौतिकवाद र बीचका धारा ।
यसरी बीचका धारा अन्तर्गत द्वैतवाद , तटस्थतावाद वा समन्वयवाद रहेका छन् । दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नको दोस्रो प्रश्नको विवेचना गर्दा यसको उत्तर दिने र चिन्तन र सत्ताको तादाम्यता यश प्रश्नमा जसले सकारात्मक उत्तर दिने गर्दछन् ती भौतिकवाद र ज्ञेयवादको श्रेणीमा पर्दछन् र नकारात्मक उत्तर दिनेहरू अज्ञेयवादको श्रेणीमा पर्दछन् ।
परम विचारलाई प्रधान मान्ने ग्रीक दार्शनिक प्लेटो , निरपेक्ष विचारलाई प्रधान मान्ने जर्मन दार्शनिक हेगेल , इच्छाशक्तिलाई प्रधान मान्ने जर्मन दार्शनिक नित्से आदर्शवादी दार्शनिक हुन् । “ब्रहम सत्य जगत मिथ्या ” भन्ने अद्वैत वेदान्त आदर्शवादी दर्शन पनि रहेको छ । दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नमा तटस्थता प्रकट गर्नेमा मूलतः नेपालका दार्शनिक गौतम बुध्द रहेका छन् ।
अन्त्यमा , विश्व ब्रह्माण्ड ज्ञेय छ अर्थात् विश्वलाई जान्न सकिन्छ , बुझ्न सकिन्छ भन्नेहरु भौतिकवादी हुन् । यसमा संसार ज्ञेय छ भन्ने प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु भौतिकवादी हुन् । यसको विपरीत जसले यो संसारलाई जान्न सकिदैन , बुझ्न सकिदैन भन्दछन् ती आदर्शवादी हुन् । स्कटल्याण्डका दार्शनिक ह्युम र जर्मन दार्शनिक काण्ट आदर्शवादी हुन् । तिनीहरूलाई अज्ञेयवादी पनि भनिन्छ । यसरी दर्शनशास्त्रको मौलिक प्रश्नका वारेमा प्रष्ट रुपमा बोध गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ आदर्शवादी दर्शन शोषक , फटाह , सामन्त र पुँजीपतिहरुको पक्षधर रहेको छ भने भौतिकवादी दर्शन श्रमजीवी , सर्वहारा वर्गको पक्षधर रहेको छ । माक्र्सवादी दर्शन भौतिकवादी दर्शन हो । र , माक्र्सवादी दर्शन श्रमजीवी , सर्वहारा वर्गको मुक्तिको सिध्दान्त हो ।
( लेखक नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागका सचिव हुन्)